Amatekisi akhala ngegwinya le-Afcon | IOL Isolezwe
Amatekisi akhala ngegwinya le-Afcon
Isolezwe / 18 January 2013, 3:12pm /
BAYAVEVA osomatekisi baKwaZulu-Natal abebenethemba lokuthi nabo bazohlomula njengoba iNingizimu Afrika izobamba imidlalo ye-Africa Cup of Nations (Afcon), eqala kusasa.
Izinhlangano zamatekisi, okubalwa kuzo i-South African National Taxi Council (Santaco), KwaZulu-Natal Transport Alliance (KZNTA) neTop Six, zishiye ezingalazi ekomidini elihlela le midlalo, iLocal Organising Committee (LOC), ngokubavalela kwayo ngaphandle.
Bathi yize nabo bengezinye zezindlela ezibalulekile zokuthutha umphakathi kodwa iLOC ibashaye indiva, yakhetha abamabhasi nezitimela.
Bafanise okwenziwe yileli komidi nokwakwenziwa wuhulumeni wangesikhathi sobandlululo okwakuthi uma kunemicimbi emikhulu abantu abamnyama bangabonelelwa ngalutho.
Unobhala we-KZNTA, uMnuz Bafana Mhlongo, uthe babekade bethenjisiwe ukuthi bazothola intshontsho ngokusingathwa kwalo mqhudelwano kodwa sekuyabakhanyela ukuthi uhulumeni akanandaba nale mboni.
“Sikhishwa inyumbazane. Asinakiwe kodwa solithola ithuba lokukhombisa uhulumeni ukuthi sikhona nathi ngoba siyabona ukuthi usesikhohliwe.
“(Induku) siyithukuse emqubeni, sovuka konakale izinto,” kusho uMhlongo ngentukuthelo.
UMnuz Big-boy Dladla onguSihlalo we-Top Six uthe bebenethemba lokuthi umasipala weTheku ne-LOC uzobabiza ukuthi bazothutha umphakathi ngesikhathi semidlalo kodwa akwenzekanga.
Uqhube wathi okwenzekayo akubamangazi kakhulu ngoba kwenzeka into efanayo bevalelwa ngaphandle ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba ngo-2010 nangesikhathi sengqungquthela yesivuvujikelele, iCop 17, ngo-2011.
“Yithina esithutha abantu abaningi ngezimoto zethu kodwa uma sekumele senze lokhu uma kunemicimbi, asinakwa.
“Sithule sibheke isiphetho sale nto eyenzekayo. Besazi ukuthi bebengeke bashiywe ngaphandle abamabhasi nezitimela,” kusho uDladla.
Inhlangano elawula ibhola lezinyawo e-Afrika i-Confederation of African Footbal (CAF) ne-LOC benze isivumelwano sokusebenzisana nabezitimela i-Passenger Rail Agency of South Africa.
I-KZN inikwe izitimela zamahhala ezingu-26 ezizothutha abalandeli bebhola abanamathikithi besuka emalokishini aseThekwini, uMashu noMlazi, zibase eMoses Mabhida Stadium.
Abe-LOC bathe isitimela ngasinye sizothwala abantu abangu-2 000.
Lokhu kuthukuthelise unobhala weSantaco kuzwelonke, uMnuz Philip Taaibosch. Uthe bashaywe udume lwengozi ngokukhishwa kwezitimela ezingaka ekubeni bona bengeke bahlomule lutho.
“Siphoxekile ukuthi ngalesi sikhathi senkululeko i-LOC nohulumeni abayihloniphi futhi kushaywa ngesithende imboni yamatekisi njengoba kwakwenziwa ngasikhathi sobandlululo. Ngeke siphele moya, sizoqhubeka sihambele amarenki sinxenxe abagibeli bethu ukuthi bathenge amathikithi baye ezinkundleni ngesikhathi semidlalo ye-Afcon,” kusho uTaiabosch, othe bavalelwe ngaphandle ezingxoxweni wuhulumeni.
Usihlalo we-LOC e-KZN, uMnuz Vusi Mazibuko, uthe izolo babekade bebatshelile abemboni yamatekisi ukuthi ngeke zibe khona izindawo zokugibelisa abalandeli uma beya noma bebuya enkundleni kodwa zikhona izinhlelo zokubahlomulisa abanazo.
Akathandanga ukunaba ukuthi yibaphi osomatekisi abazohlomula. Uthe uyayihlonipha le mboni futhi basazimisele ukusebenzisana nayo ngemuva komqhudelwano.
“Akuzona zonke izindawo ezinemizila yesitimela ngakho sizowadinga amatekisi ukuthi alekelele ekuthuthweni kwabantu. Akulula ukuthi ngisho ukuthi ngobani esikhulume nabo embonini yamatekisi,” kusho uMazibuko.